केटी पट्याउने सजिलो उपाय ५ सुत्रसहित - DayKhabarDay Khabar
Day Khabar २०७७ कार्तिक १८, मंगलबार
महिला र पुरूषबिचको आकर्षण सदियौ देखीको एक प्राकृतिक नियम नै हो । जवानीमा प्रवेश गरेपछी त पुरूष तथा महिलाहरूमा एक अर्काप्रति हुने आकर्षण पनि निकै नै बढी हुन्छ ।
जवानीमा पुगेका पुरूष हुन् या महिला आफू सुहाउँदो र मनपर्दो महिला या पुरूषलाई आकर्षित गर्न चाहन्छन् । यसरी एक-अर्कालाई आकर्षित गर्नका लागि महिला तथा पुरूषहरू विभीन्न हतकण्डा अपनाउने गर्छन् तर सानोभूलले उनीहरु असफल पनि हुने गरेका घटनाहरू पनि निकै नै छन् ।
यस मामलामा पुरूषहरू झन् बढी असफल हुने गरेका छन् । सकेसम्म राम्री युवतीको साथमा रहने चाहनामा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न खोज्दा केही साना गत्लिकाकारण ती युवतीको नजरबाट उनीहरू टाढा हुने गर्छन् । तर यदी केही स-साना कुरामा ध्यान पुर्याउन सके युवतीहरू ती पुरूषहरूसँग सहजै आकर्षित हुन्छन् र पुरूषहरुको राम्री युवतीसँग रहने, हेलमेल गर्ने चाहना पनि पुरा हुन्छ । यसका लागी पुरूषहरुले केहीकुरामा ध्यान भने पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । केही यस्ता उपायहरू जसलाई केटी पट्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ती यस्ता छन् ।
१. यदी केटीलाई पट्याउनु छ भने सबैभन्दा पहिले उक्त केटी के प्रति बढी आकर्षित हुन्छिन् त्यो पत्ता लगाउनु जरूरी हुन्छ । उसका बारेमा जानकारी हासिल गरेपछी उनका सा-साना कुरालाई भने उनीसामू राख्ने र उसको बारे जानकारी राख्न सकेकोमा आफूलाई उनी अगाडि निकै सक्षम तथा घमण्डी देखाउने नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
२. हरेक कुरा बोल्नु अघि विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ । केही कुरा बोल्दा या व्यवहारमा कतै उनीसँगयस्तो कुरा बोल्ने र व्यवहार नगर्ने जसले केटी वा उनका साथीको अपमान होस् । यसले अगाडि बढीसकेको कुरा पनि बिग्रिन सक्छ र तपाईको सपना त्यतिकै तुहिन सक्छ ।
३. केटीका अगाडि कहिल्यै पनि आफूलाई सबैभन्दा जान्ने तथा सबै विषयमा जानकार भएको देखाउन खोज्दा पनि आफूप्रति केटीमा विकर्षण हुने गर्छ । त्यसैले आफूले धेरै कुरा जानेको घमण्ड गर्नु र दुनियाँमा आफूजति जान्ने मानिस अरू कोही छन् भनेर देखाउन नखोज्नु नै राम्रो हुन्छ।
४. केटीका सामू आफूलाई सकेसम्म परिपक्क, जिम्मेदारव्यक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने । आफूले अरूलाई गर्ने व्यवहारमा कुनै फरक नगर्ने अर्थात् ठूला हुन् या साना सबैलाई समान व्यवहार गर्ने गर्दा केटीलाई सहजै आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ।
५. आफूले गरेको कामप्रतिको लगाव र आत्मविश्वास राख्नु पनि केटीलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हुन सक्छ । आफूले गरेको कामप्रति आफ्नो लगावले आफूलाई सफलतातर्फ डोहोर्याउँछ भने त्यही सफलताले केटीहरूलाई पनि आकर्षित गर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा